စျေးကွက်ရှာဖွေသူများ - ဤအပြုအမူများကိုဗြိတိန်နိုင်ငံမှဝယ်ယူခြင်းအတွက်အသိအမှတ်ပြုပါ Martech Zone
စျေးကွက်ရှာဖွေသူများ - ဤအပြုအမူများကိုဗြိတိန်နိုင်ငံမှဝယ်ယူခြင်းမှအသိအမှတ်ပြုပါ
ကြာသပတေးနေ့, စက်တင်ဘာလ 7, 2017 ကြာသပတေးနေ့, စက်တင်ဘာလ 7, 2017 Douglas Karr
ငါအဲဒီမှာဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာမင်းမြင်သလား။ ဤသည်အနောက်အလယ်ပိုင်းဒေသအနောက်ဘက်ခြမ်း၌ဗြိတိသျှစာလုံးပေါင်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည် အပြုအမူ အပြုအမူထက် ကျွန်ုပ်သည်မည်မျှလောကီရှိသည်ကိုလူတိုင်းအားသက်သေပြချင်သည်။ သို့မဟုတ်မရ။ ကျွန်တော့်အမေဘက်ခြမ်းရှိစကော့တလန်နှင့်ဗြိတိသျှအမွေအနှစ်များရှိလင့်ကစားယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းသို့ကျွန်ုပ်လုံးဝရောက်ဖူးခြင်းမဟုတ်ပါ။ (ဒါကိုကြည့်ပါ။ ငါထပ်လုပ်လိုက်တယ်!)
အိုဟေး၊ ဟဲ့ဒီဘက်ကဒါကဖမ်းဆီးရမိတဲ့သတင်းကြီးတစ်ခုပါ CM အမှတ်တံဆိပ်။ ငါတကယ်ဒါကဒီနေရာမှာယူနိုက်တက်စတိတ်ရှိမြို့ပြဝယ်ယူမှုအပြုအမူ၏ပိုမိုတိကျသောပုံဖော်တင်ဆက်မှုဖြစ်နိုင်သည်။
စားသုံးသူအပြုအမူကိုနားလည်ခြင်းသည်မည်သည့်ကုန်ပစ္စည်းများ (သို့) မည်သည့်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းကိုထုတ်ဖော်သည်ကိုရှာဖွေခြင်းမျှသာမဟုတ်ပါ မြှင့်တင်ရေးလက်ဆောင်တွေ တစ် ဦး လူ ဦး ရေအချိုးအစားမှအယူခံ။ စျေးကွက်သမား၏ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်၎င်းသည်ဖောက်သည်တစ် ဦး သည်အဘယ်ကြောင့်တစ်စုံတစ်ရာသောပြုမူကျင့်ကြံပြုမူပုံကဲ့သို့အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုရယူခြင်းအကြောင်းဖြစ်သင့်သည် ထူးခြားတဲ့ဆုလက်ဆောင်စတိုးဆိုင်လူလူချင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုမည်သို့အချင်းချင်းဝေမျှသည်၊ သူတို့၏အမြင်များကိုပုံသွင်းရာတွင်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာလွှမ်းမိုးမှုများသည်မည်သို့ရှိသနည်း။ မက်စ်ဘာဘမ်
ပြည်ပမှာ (နှင့်ဤတွင်ပင်) သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာများကိုသင်ဖွံ့ဖြိုးနေစဉ်တွင်သတိရသင့်သည့်အပြုအမူအမျိုးမျိုးကိုဖော်ပြထားသည်။
ယူကေစျေးဝယ်သူများသည်သစ္စာစောင့်သိသူများဖြစ်ကြသည် - ၎င်းတို့၏အချက်အလက်များကိုသိမ်းဆည်းထား၊ ထိတွေ့ပါ၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအားထုတ်မှုများကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ။
ယူကေစျေး ၀ ယ်သူများတန်ဖိုး၊ အခမဲ့၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြန့်ဝေမှုနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပြန်ခြင်း - ဖြန့်ဝေသည့်ပြresolveနာများကိုဖြေရှင်းပြီးအွန်လိုင်းလက်လီရောင်းဝယ်မှုတွင်ရှင်သန်ရန်အခမဲ့ပြန်လည်ပေးအပ်သည်။
ယူကေစျေးဝယ်အွန်လိုင်းထုတ်ကုန်များ - ဖောက်သည်များကသင်၏ထုတ်ကုန်များအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များကိုရှာဖွေခြင်း၊ လူမှုရေးနှင့်ပြည့်စုံသောထုတ်ကုန်ကိုအာရုံစိုက်သောကွန်ရက်မှတစ်ဆင့်အွန်လိုင်းမှရှာဖွေနိုင်သည်။
Brit's Buying ခရီးအတွက်စတိုးဆိုင်များသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည် - သင်၏အွန်လိုင်းနှင့်အော့ဖ်လိုင်းစတိုးဆိုင်များကိုအဆင်ပြေချောမွေ့သောစျေးဝယ်ခြင်းအတွေ့အကြုံအတွက်ပေါင်းစပ်။ ၀ ယ်ယူမှုများနှင့်သစ္စာရှိမှုများကိုဆုချပါ။
ကုန်ပစ္စည်းအရောင်းကိုယ်စားလှယ်များ၏ကုန်ပစ္စည်းဗဟုသုတနှင့်ကုန်ပစ္စည်းများကိုကြည့်ရှုနိုင်ခြင်းသည်အရေးကြီးသည် - ၀ ယ်ယူသူများအားသင်တန်းနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွင်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေခြင်းဖြင့်ချောချောမွေ့မွေ့ ၀ င်ရောက်နိုင်သည့်အတွေ့အကြုံကိုပေးပါ။
အနှစ်တစ်ထောင်ဗြိတိန်လူမှုကွန်ယက်များမှအတည်ပြုချက်ကိုရှာ - လူမှုမီဒီယာပေါ်တွင်သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏တည်ရှိမှုကိုတိုးမြှင့်။
မိုဘိုင်းစျေး ၀ ယ်ခြင်းသည်သက်ငယ်စားသုံးသူအုပ်စုများအတွက်အဖိုးတန်သည် - လူငယ်စျေးဝယ်သူများအတွက်ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းကိုတိုးမြှင့်ရန်သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်၏မိုဘိုင်းအတွေ့အကြုံကိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ပါ။
ဒီမှာတောက်ပတဲ့အချက်အလက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေပါ။ Brits ၏အလေ့အကျင့်များနှင့်အမူအကျင့်များစျေးဝယ်သူများသည်သိရန်လိုအပ်သည်.
Tags: ဗြိတိန်ဗြိတိသျှအပြုအမူဝယ်ခြင်းအပြုအမူများဝယ်ယူIn-store Shoppingထောင်စုနှစ်ဝယ်ယူအပြုအမူမိုဘိုင်းစျေးဝယ်အပြုအမူဝယ်ယူ validation ကိုလက်လီစျေးဝယ်အပြုအမူစျေးဝယ်ဆိုရှယ်မီဒီယာအတည်ပြုခြင်းukယူကေစျေးဝယ်သူများစျေးဝယ်သစ္စာရှိမှုဗြိတိန်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း
လုပ်ငန်းအသွားအလာ - ဒီနေ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဌာနကိုအလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်
Act-On: ရည်ရွယ်ချက် - တည်ဆောက်ခြင်း, SaaS၊ Cloud-based Marketing Automation